SomaliaReport: 51 Dhallinyarada Al-Shabaab oo DKMG Isu Dhiibay
By ABDI ABTIDOON 10/31/2011
Hay’adda nabadsugida Soomaaliya oo Isniintii soo bandhigtay dagaalyahano al-Shabaab ah oo 50 kor u dhaafay, iyagoo isugu dhiibay Muqdusho ciidamada Soomaaliya.
Ibraahim Cumar Aaden, afhayeenka Hay’adda Nabadsugida Soomaaliaya (CID), ayaa xaqiijisay in dhallinyaro usu dhiibeen dawladda saddexdii maalmood ee lasoo dhiifay iyo in loo gudbin doono xarunta turxaan bixinta.
"Saddexdii maalmood ee ugu danbeeyey waxaa nasoo gaaray 51 wiillal dhallinyaro ah oo ahaa dagaalyahanada al-Shaab. Waxaan kusoo dhawaynay gacmo furan waayo waa jiilka mustaqbalka," ayaa Ibraahim yiri.
Dagaalyahanadu waxay ka cowdeen cuno la’aan iyo guursasho lagu khasbay intay la joogeen malayshiyaadka Islaamiga ah.
"Waxaan al-Shabaab ka tirsanayn saddex sanno. Waxaan ku biiray 2008 anoo ka tirsan kooxaha khidad ku dillida. Waxaan ka hawlgalay qaybo badan ee dalka, laakiin dhawaanahan waxay ku sugnaa Muqdisho," waxaa yiri Maxamed Cali Ciid, oo ka mid ah dhallinyarada isdhiibtay.
"Waxaan go’aansanay inaan ka baxno kadib markii aan la kulanay dhibaatooyin badan. Hogaamiyayaashada al-Shabaab waxay rabaan inaan guursano afar dumar ah, Teeda kale, wax cuno ah ma helin intii aan ku jirnay furnta hore," ayuu yiri.
Kuwani waa intii ugu badnayd ee dagaalyahano al-Shabaab ah oo isu dhiiba dowladda Soomaaliyeed todobaad gudihiis.